Uwe mkpuchi 2017 - maka afọ ọhụrụ, agbamakwụkwọ, obere na ogologo ụdị. Uwe mkpuchi maka oke.
Cocktail Uwe 2017 - kacha fashionable na nkecha
Laconism na ukpụhọde bụ isi atụmatụ nke mmanya oyiyi nke 2017. Uwe bụ mgbe niile ihe dị mkpa nke a mara mma ụta. Uwe mkpuchi 2017 - bụ nhọrọ a na-apụghị ichetụ n'echiche nke ụdị nke mbụ, nke mbụ, ụdị ndị mara mma nke ga-enyere onye ọ bụla fashionista aka imesi ike na onye ọ bụla na emeghị ihe ọ bụla n'oge ememe ahụ.
Ebube na-emechi emechi 2017
Na oge ọhụrụ ịhọrọ ụlọ mposi maka mmanya adịghị mfe. Na nchịkọta nke ọma, ndị na-emepụta na-echebara atụmatụ niile nke ụdị oyiyi - agba, mma, na ihe ndozi. Ndị na-emepụta ihe anaghị eleghara atụmatụ dị iche iche nke ọnụ ọgụgụ ahụ anya, na-ewebata ụdị maka abụba na ụmụ nwanyị nọ n'afọ ndụ ha. A na-enye ụdị dịgasị iche iche nke oke ákwà. Na 2017, ihe ndị dị n'elu maka uwe mmanya na-edozi, silk, owu, akpụkpọ anụ, tulle. Ịdị ahịa nke ngwaahịa na-egbu egbu. A na-eweputa ngwaahịa ndị a dịka uwe ejiji maka ememe na ezinụlọ dị nso, nakwa dị ka uwe mmanya maka Afọ Ọhụrụ 2017. Ka anyị nyochaa ọtụtụ nchịkọta ejiji:
Ọcha mmanya . Ụdị ejiji na oge ọhụrụ ahụ aghọwo onyinyo gbara ọchịchịrị. Uche mmanya na-acha na-acha odo odo na-ahụ maka ọdịdị ọ bụla, tinyere ngwa na etemeete. Ngwongwo kachasị ewu ewu na ngwaahịa sitere na akpụkpọ anụ na velvet na-agbasapụ. Otu ihe dị iche iche dị otú a bụ ịkpụcha otu ubu, otu ihe na-egbu nri na obere aka. Ụdị owu, silk, chiffon na- eji uwe akwa . Maka ụdị ejiji ndị a, ọnọdụ multilayer, cascade, asymmetry, miri olu bụ n'ezie.
Uwe mmanya mmanya . Ụdị ndị inyom na-egbuke egbuke - nhọrọ dị mma nke uwe maka ụmụ nwanyị nke Balzac. A na-egosipụta usoro ejiji na ụzọ na-ezighị ezi. Ihe ngwọta a na-ewu ewu bụ ejiji nke ihe eji egbuke egbuke - silk, chiffon, tulle. Ọ na-eme ka nkwenye na nkwekọrịta nke ọnụ ọgụgụ ahụ gbasiri ike site n'ikwu ya n'úkwù - ákwà ejiji ma ọ bụ ihe ejiji mara mma. Ihe ngwọta mara mma ga-abụ ejiji mmanya mmanya 2017 nke na-acha uhie uhie na akwa ma ọ bụ ngwugwu na-achacha ya na ákwà na-acha odo odo, ihe ịchọ mma na-acha ọkụ ọkụ nke feathers, agba ákwà, ihe ntinye na ntinye.
Uwe mmanya mmanya . Nye ndị hụrụ ụta ji nwayọọ na ụta, ngwọta kachasị mma ga-abụ uwe nke oge agbacha agbagọ. Na nchikota ohuru ihe ndi ozo di nma. Na uwe ejiji mmanya na paillettes, beads, rhinestones, embroidery nke na-egbuke egbuke eri. Ndị na-emepụta ihe na-enye aka iguzogide onyinyo ahụ na ụdị ikuku airy, na-ahọrọ ụdị chiffon, translucent tulle, ákwà silk ma ọ bụ owu. Ndị na-ewu ewu bụ ndị na-achọ ịchọta ụzọ na-agba ọsọ. Ọdịdị mara mma ga-enyere aka ịgbakwunye mgbarụ na ntụrụndụ dị jụụ, ikpuchi ụgbọelu na mpempe akwụkwọ.
Ụdị mmanya uwe
Ihe dị iche iche na ngwaahịa ndị dị na oge ọhụrụ agaghị ekwe ka nwa agbọghọ ọ bụla dị umeala n'obi ghara ịhụ ya. Mma uwe mmanya na- anọchi anya ya na ọdịdị na-adabara adaba, a ogologo na lush mbipute, asymmetrical ịkpụ na ihe ndozi. Nhọrọ ndị a na-ahọrọ bụ ụdị nke ihe ọ bụla jikọtara, ma jikwa ngwa ngwa dị iche iche - boleros na okpu, ihe ịchọ mma isi na chacha, boutonniks na brooches. Ndị na-emepụta ihe ndị mbụ na-akpụkpọ ụkwụ na ngwa ngwa:
ụta a ma ama anaghị adaba na oge a. A na-ewere akwa akpụkpọ ụkwụ ma ọ bụ nnukwu ikiri ụkwụ dịka ihe ngwọta zuru oke n'ịhọrọ akpụkpọ ụkwụ maka uwe mmanya;
iguzo site na ndi ozo, o bara uru iji gosiputa ihe okike na eccentricity n'inweta mmanya obo. Maka nke a, stylists na-enye akpụkpọ ụkwụ ụkwụ na akpụkpọ ụkwụ n'elu ikpo okwu ma ọ bụ mkpịsị ụkwụ nke ọdịdị mbụ, na-eji ihe a pịrị apị, ihe ịchọ mma n'elu ihe oyiyi anụmanụ, ụmụ ahụhụ, okooko osisi;
Achọpụta akpụkpọ ụkwụ kachasị mma maka uwe na-adịghị mma n'oge ọhụụ bụ akpụkpọ ụkwụ dị elu. Ndị na-edepụta akwụkwọ na-enye ụdị ihe kwesịrị ekwesị na ikiri ụkwụ ma ọ bụ n'elu ikpo okwu, nakwa nke dị iche iche na akwa eji achọ mma, n'ụdị lace, eriri, ihe ntanetị;
Ihe oyiyi ahụ na-aga n'ihu na-ewu ewu. Ndị na-ede akwụkwọ na-enye akpụkpọ ụkwụ ballet na akpụkpọ ụkwụ na traktọ ma ọ bụ n'elu ikpo okwu, na oghere aka, nkwonkwo ụkwụ, isi ihe nrịta;
mgbe ị na-ahọrọ akpa aka maka uwe ejiji, ndị stylists na-akwụsị na minimalism. Uwe mkpuchi akwa 2017 na-ejikọta ya na ngwa ngwa na ogologo ogologo, nakwa dị ka njide nke textiles dị nro, ọ bụghị ijide ụfọdụ ọdịdị.
Short mmanya uwe . Ogologo ogologo oge uwe mmanya na oge ọhụụ ga-adị site na n'elu ikpere ruo ọnụ ọgụgụ, na-ekpuchi ikpere ikpere. Ọ bụrụ na ịchọrọ ile anya na-eme ka uwe gị dị mkpụmkpụ, gee ntị n'àgwà ndị a na-emepụta ma ọ bụ ndị na-adọrọ adọrọ, ebe ebe nchekwa dị ala ga-adị nfe. N'okwu a, a na-ewere agba agba dịka ihe kwesịrị ekwesị. Iji gbasaa uwe gị, họta ebe ha ga-anọ. Oyi juputara na - akwa mmanya na-acha anụnụ anụnụ, akwa na-acha uhie uhie, uzo ihe omimi nke emerald, chocolate, marsala , na nrughari uzo di nwayo abiala ebe a.
Lacy mmanya uwe . Achịkụ dị iche iche na nchịkọta nke uwe akwa akwa na-eweta ngwaahịa sitere na ihe onwunwe siri ike. Akpụkpọ ụkwụ nke lace - ọ bụ nwayọọ nwayọọ ma ọ bụ nke a na-atụgharị ya na uwe elu. Na ejiji ejiji dị iche iche, na-akọwapụta ihe ndị dị mkpa, nakwa dịka nhọrọ nhọrọ ederede doro anya. Ihe ngwọta a na-ewu ewu bụ ihe nkedo na-egbuke egbuke, 3/4, akwa eriri, nakwa ụdị ejiji n'ubu. N'oge ọhụụ, ndị na-emepụta ihe na-enye ndị uwe ojii, ma agba chaa chaa chaa acha na-acha uhie uhie, odo, acha anụnụ anụnụ. Ngwa ọcha na-acha ọcha ga-edozi uwe mmanya maka agbamakwụkwọ.
Uwe mkpuchi na-emeghe azụ . Ụdị na nke mbụ ga-abụ onyinyo gị na uwe, nke a na-agbakwụnye site n'olu dị mma n'azụ azụ. Na ejiji, ọ bụghị naanị na-emeghe V na-azụ azụ, ma a variant na a oghere n'etiti a geometric udi - a gburugburu, a rhombus, a square. A na-ebute ngwaahịa ndị ahụ ma na-egbutu ya ma jiri onwe ya nwee ogige mara mma, na-abanye na uwe aka. Uwe mmanya mmanya 2016-2017 na azụ azụ bụ nhọrọ kasị mma na kacha mma nke ụlọ mposi mara mma maka oriri oriri ma ọ bụ oriri ezinụlọ. Enwere ike ịchọta ihe ịchọ mma dị otú a ma ọ bụ shawl mara mma translucent ma ọ bụ ihe mkpuchi nke lacework.
Uwe mkpuchi maka oke . Ulo ejiji maka ndaputa mkpuru maka ndi nwe ihe di ebube abughi iji zoo ezighi ezi, kama igosi uru. A na-eji akwa ejiji maka ụmụ nwanyị na ụmụ nwanyị zuru oke n'ụzọ dị iche iche na-akpachi anya na ụzọ ndị na-adịghị mma na-emesi ike n'úkwù, obi, hips. A na-ele ogologo oge anya midi. Ọ bụrụ na ị nwere oke ịgba gburugburu na afo, ị kwesịrị ịṅa ntị na ihe dị mma ma ọ bụ A-shaped silhouette nke ihe na-egbuke egbuke. Emechila ihe na-aga n'ihu n'okpuru akpịrị. Họrọ ụdị ndị nwere nnukwu olu na yok nke lace ma ọ bụ uzo tulle.
Uwe mkpuchi aghọọ ihe dị mkpa nke uwe ejiji nke ndị inyom ejiji na 2017. Ihe dị iche iche, nke ihe dị iche iche, ogologo, ihe ịchọ mma na ihe ịchọ mma dị iche iche, jupụtara n'ọbara bara ọgaranya na ụda dị nro nke palettes pastel. Ndị na-emepụta ihe nakọtara na nchịkọta mmanya na-emepụta àgwà niile kachasị mkpa n'àgwà ụmụ nwanyị, na-eme ka atụmatụ ha dị ọcha - ihe ịchọ mma fesi, mma akpụkpọ ụkwụ mara mma, akwa akpụkpọ ụkwụ. Ihe bara uru nke ihe ngosi ohuru bu uzo nke uzo ndia, nke na-enye ohere inye ihe oyiyi di egwu maka uzo ma obu bree a gbachire ememe maka ezin ul o.
Ugwu nke 2014
Ejiri ejiji n'oge mgbụsị akwụkwọ
Egwuregwu na ụdị ihe nkiri
Uwe eji eji osisi na-ede akwụkwọ 2013
Ekeebe ụmụ nwanyị maka oge opupu ihe ubi 2015
Ụdị ejiji na ụzọ iri asatọ
Ụdị Nri Nri
Uwe ejiji nke nwanyi 2015
Uwe ejiji ndị inyom 2016
Lee Site Chloe
Ntucha «Volumetric sweta»
Echocardiography na analysis Doppler
Ogwe oche maka ụmụ nwanyị dị ime
Ọgwụ ọdịnala maka ụkọ ọnwụ
Esi tinye window?
Ihe omimi nke ihe omuma nke zodiac
Ngwa maka ụmụ nwoke dị ka onyinye
Ihe ịrịba ama ma ọ bụrụ na enwere ike ịmalite ọkpụkpụ nke ehihie n'ụbọchị
Ndacha nke na-emecha windo
Ntụ ọka - kụrụ ma lekọta
Blake Lively na Ryan Reynolds
Nlekọta ọkụkọ na cheese
Coleus - ihe ịrịba ama na nkwenkwe ụgha
Anorexia - esi enweta ọrịa?
Mmiri ihe ọṅụṅụ - ihe ọma na ihe ọjọọ
Ọrụ dị mfe maka ndị ime ime
Uhie na-acha uhie uhie na-enweghị ikiri ụkwụ
Kedu otu esi meziwanye mgbagwoju anya?
Ụcha ntutu na-acha uhie uhie
Dystrophy nke retina